Tuesday November 24, 2020 - 11:52:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay madaxweynaha waqtigiisu sii idlaanayo ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay isku diyaarinayaan sidii ay usameyn lahaayeen xilwareejin dhanka maamulka ah.
Donald Trump ayaa qoraallo uu soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu ku bogaadiyay dadaallada socda ee ladoonayo in lagu sameeyo munaasabad xilwareejin ah oo talada uu ku qabanayo Joe Biden musharaxii xisbiga Jamhuuriga ee ku guulaystay doorashooyinkii dhowaan dhacay.
Joe Biden ayaa isna soo dhowayn ka helay Maamulka Adeegyada Guud ee dalka Mareykanka si uu ubilaabo uruunqaansigiisa dhanka Aqalka Cad waxyar kadib markii lagu dhawaaqay in uu ku guuleystey codadka gobolka Michigan.
Maamulka Adeegyada Dadweynaha ee Mareykanka ee GSA oo ah maamul madax bannaan kana shaqeeya xilal ukala wareejinta mas'uuliyiinta ayaa ku wargaliyay Biden in kala wareejinta awoodda ay si rasmi ah u bilaaban doonto ka hor inta uusan xafiiska la wareegin 20-ka Janaayo sanadda 2021.
Shabakadda CNN ayaa soo warisay in madaxa shaqaalaha ee Aqalka Cad Mark Meadows uu helay nuqul ka mid ah warqadda Biden ee hay'adda GSA isagoo ku wargelinaya inuu bilaabi karo howlaha kalaguurka.
dhawaqa kasoo yeeray Trump iyo hay'adda GSA ayaa si aad ah looga hadal hayaa dalka Mareykanka waxaana aad uyaraaday cabsidii laga qabay in madaxweynaha xilka sii haya ee iska diiday natiijada doorashadii dhowaan dhacday uu sabab unoqdo khalaase dhaxmara taageerayaasha labada dhinac.
dhinaca kale Golaha Gobolka Michigan oo ka kooban 30 xubnood ayaa ansixiyay guushii Joe Biden ee doorashadii madaxtinimada ee gobolka kadib kulan qaatay waxka badan saacado badan waxaana go’aanka taageeray xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga halka mid kalena uu diiday inuu taageero.
Sida uu qabo xeerka udegsan gobolka Biden wuxuu sidoo helayaa codadka 16-ka guddiyada doorashooyinka, madaxa Ololaha Trump wuxuu hoos u dhigay muhiimada ansixinta Michigan isagoo carabka ku adkeeyay in ansixinta saraakiisha gobolka ee natiijooyinka tirinta ay tahay kaliya tallaabo haldhinac ah.
Wariyaasha ayaa sheegay in quusta ay muujiyeen Trump iyo ololihiisa doorashada ay timid kadib markii gacanta dib loogu tiriyay codadkii laga dhiibtay gobollada Joorjiya,Bansalfeeniya iyo Michigan natiijada soo baxdayna ay tahay in guushu ay raacday xisbiga dimuquraadiga ah.
sedaxdaan gobol ayaa caan ku ahaa in ay taageera siiyaan xisbiga jamhuuriga balse sanadkaan ay ku biireen taageerayaasha xisbiga dimuquraadiga ah ee dib ula wareegaya talada Mareykanka.
Waare oo ku dhawaaqay in uu iska casilay xilka madaxweynaha 'Hirshabelle'.